Teknụzụ Archives - SunTrust Blog
Otu esi tọgharịa iPhone kpamkpam na ntuziaka ka ịmalitegharịa ya ngwa ngwa
– Olee otú kpamkpam Tọgharia iPhone – Ọ bụrụ na ị furu efu iPhone paswọọdụ, ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla, ị ga-amasị iji tọgharịa ya kpamkpam, mgbe ahụ, ọ dịghị mkpa ka nsogbu. Anyị enyela ebe a, dị iche iche nzọụkwụ na ụzọ kpamkpam tọgharịa iPhone ...
Ụgbọ ala ngwakọ ejiri kacha mma maka 2021 na nyocha, foto na ọnụ ahịa
- Ụgbọ ala ngwakọ eji eme ihe kacha mma - Ụgbọ ala ngwakọ nwere ike ịdị mma maka gị ebe ọ nwere ike inyere gị aka ịnya n'ihu na obere mmanụ ụgbọala site na ịgbatị oge gas gị. Ọtụtụ ụgbọ ala ngwakọ na-enyekwa plethora nke nkasi obi na teknụzụ teknụzụ dị elu…
Ngwa 10 efu iji soro ebe ekwentị mkpanaka n'efu site na ebe ọ bụla
By Na -agba egwu November 26, 2021 Technology 0 Comments
– Sochie a Cell ekwentị ebe maka Free – Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ usoro iji nyochaa na-agbake a furu efu ekwentị, nnọọ echiche nke ida ya bụ iji mee ka ụjọ. Ọ bụ ezie na ọ dị mfe inyocha ekwentị, ị...
Ụgbọ ala akpaaka maka ọrịre dị nso m dị ọnụ ala ma na-adịgide adịgide
By Victoria Akpan TMLT November 22, 2021 Ịzụ ahịa, Technology 0 Comments
- Ụgbọ ala akpaaka maka ọrịre dị nso m - Ọbụna na mmefu ego, ịzụrụ ụgbọ ala akpaka dị ọnụ ala nke a na-ere ere na-eme ka ọ dịkwuo mfe taa. Ọtụtụ n'ime ha na-enwetakwa oke gas dị elu, nke na-enyere aka idobe mmefu ego nke nwe...
Azụmaahịa mgbazinye ụgbọ ala kacha mma maka ụgbọ ala ọhụrụ nwere onyinye dị ịtụnanya sitere n'aka ndị na-ere ahịa
By Victoria Akpan TMLT November 18, 2021 Ịkwụ ụgwọ, ngwaahịa, Technology 0 Comments
- mgbazinye ụgbọ ala kacha mma - ịgbazinye ụgbọ ala bụ ụzọ dị mma iji nweta ụgbọ ala ọhụrụ mgbe niile na-ejikọghị ego gị na akụ na-ada ngwa ngwa. Ị ga-achọtarịrị azụmaahịa kacha mma mgbe ị na-agbazinye ụgbọ ala, ...
Ụgbọ ala ezinaụlọ kacha mma ịzụta na 2021 na 2022 n'ọnụahịa dị ọnụ ala
By Victoria Akpan TMLT November 18, 2021 Ịzụ ahịa, Technology 0 Comments
- Ụgbọ ala ezinụlọ kacha mma - Ọ bụrụ na ị nwere ezinụlọ, mgbe ahụ ọ ga-adị mkpa ịnweta ụgbọ ala nke ezinụlọ, nke nwere ike isi ike ịnweta. Anyị ekpuchila gị, ma ị chọrọ ihe buru ibu ga-adabara gị, gị ...
Ụgbọ ala kacha ọsọ n'okpuru 30K na ụgbọ ala egwuregwu ị nwere ike ịzụta ugbu a
- Ụgbọ ala kacha ọsọ n'okpuru 30k - Ọ bụrụ na ị nọ na mmefu ego mana ị ka chọrọ inweta otu ụgbọ ala kachasị ọsọ n'okpuru 30k, ozi ọma ahụ bụ na ị nwetala ọtụtụ ụgbọ ala ọhụrụ dị ọnụ ala ịhọrọ site na. Ọtụtụ ọhụrụ...
Ngwakọ SUVs kacha mma 2021 maka njem dị ịtụnanya na njem dị mma
By Victoria Akpan TMLT November 15, 2021 ngwaahịa, Ịzụ ahịa, Technology 0 Comments
- Best Hybrid SUVs - Ngwakọ SUVs na-arụ ọrụ, ụgbọ ala ezinụlọ chọrọ nke enwetala ike inweta n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ha bụkwa WLTP-emissions na-arụ ọrụ nke ọma nke a ga-eji dị ka ụgbọ ala ụlọ ọrụ, n'ihi nkwụnye ọkụ ha. Ụfọdụ n'ime ha nwere ọbụna...
Best Buy Black Friday na ihe ịtụnanya izu ụka maka ụlọ gị
- Best Buy Black Friday - N'afọ a, Best Buy na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na ịmalite ọrụ Black Friday na-enye otu izu tupu oge eruo, kama na Fraịde na-esote Ekele dị ka omenala. Anyị achịkọtala ihe niile...